ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Ina Marciulionyte အား လက်ခံတွေ့ဆုံ - Ministry of Education
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Ina Marciulionyte အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Date :9December, 2019
December 9, 2019 - 8:09 am | Album
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Ina Marciulionyte ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Total Hits : 1141873446